MacBook na WWDC, Apple ụlọ ahịa Milan, AirPods na France na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Jordi Gimenez | | Apple, Mac kọmputa
Izu a bụ ihe na-adọrọ mmasị maka ụwa Mac ma bụrụ na Mark Gurman n'onwe ya kpughere igbe nke égbè eluigwe na Tuesday gara aga mgbe ọ dọrọ aka ná ntị na isiokwu Bloomberg na ndị nọ na Cupertino na-akwadebe ihe ngosi nke ọhụrụ MacBooks maka June 5 na-esote. N'isiokwu a, ọ gwaghị onwe ya na-ekwu MacBook ọhụrụ, mana ọ kpọtụrụ aha MacBook dum gụnyere Ikuku, ihe anyị na-ahụ dị ka ngagharị dị egwu nke Apple mana anyị anaghị achịkwa. Na nkenke, enwere izu 2 na ụbọchị 1 site na Sọnde a maka Apple iji mee ka anyị nwee obi abụọ na Keynote, ebe anyị na-aga n'ihu na akụkọ kachasị pụtara iche n'izu ahụ.
Nke mbụ, anyị na-ahapụ njikọ nke enwere okwu banyere MacBook ndị Apple nwere ike iweta. O doro anya na ọ bụghị ukara na Apple ewebeghị ngwaike ọ bụla na WWDC ogologo oge, ma ọ bụrụ na anyị nwere ikpe nke o mere ya na afọ a nwere ike ịbụ nke ọzọ, anyị ga-ahụ ihe na-eme.
Na ụlọ ahịa Apple ọhụrụ na Milan nke Apple. Oge a ụlọ ahịa ọhụrụ a ga - anọ n’etiti obodo a ma bụrụkwa otu n’ime ụlọ ahịa ọgbara ọhụụ Apple na - ekesasị n’elu ụwa, ụbọchị mmeghe abụghị nke ọma mana a rụọlarị ya.
Ndị si Cupertino bụ na-achọ onye njikwa mmemme iji duzie mgbasa ozi n'ihe ọ chere ga-abụ mmemme ya Apple nwere mmasị n’ịgba onye isi na mmemme iji duzie ma chịkwaa mmepụta nke aka ya n'ọwa ọdịnihu.
Tọzdee gara aga anyị hụrụ usoro dị egwu banyere mwepụta nke AirPods na nke ahụ bụ na site na iStoVE web tool anyị hụrụ a mbata dị ukwuu nke ekweisi ndị a na ụlọ ahịa Apple Apple. Awa ole na ole ka nke ahụ gasịrị, a ka nwere ngwaahịa ụfọdụ ma ọ pere mpe, Apple ọ ga-edozi nsogbu mmepụta?
N'ikpeazụ anyị na-asị goodbye na a obere nkuzi na gbanyụọ plugins Safari na foto dị n'ime na E gosipụtara Apple Park n'izu a ke akwa ibuotikọ ke Wired. Ugbu a iji nụ ụtọ ụbọchị ụka fọdụrụnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » MacBook na WWDC, Apple ụlọ ahịa Milan, AirPods na France na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Microsoft weputara OneNote maka Mac